ကားကိုင်ပါ - Earldom
သင်အဘို့အညာဘက်အရပျ၌ပါပဲ ကားကိုင်ပါ.ယခုအချိန်တွင်သင်ရှာဖွေထားပြီးမည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်တွေ့ရှိရန်သေချာသည် Earldom.ကျနော်တို့ကဒီမှာပေါ်မှာကြောင်းအာမခံပါသည် Earldom.
ထုတ်ကုန်သည်လိုချင်သောလုံခြုံမှုကိုပါ0င်သည်။ မတော်တဆထိခြင်းအတွက်အသုံးပြုသောလျှပ်ကူးဌာနခွဲများနှင့် insulaturating tements များအတွက်အသုံးပြုသောသတ္တုပစ္စည်းများအားတင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်ထားသည်။.
အကောင်းဆုံး Earldom 20w Type C ဖယောင်း prodyon app ကို iPhone 12 MINI PROX ပေးသွင်းသူ
Earldom အကောင်းဆုံး Earldom 20w Type Crick View Type ကို iPhone 12 MINI PROX ပေးသွင်းသူနှင့်အတူစူပါမြန်ဆန်သော PD cable ကိုမီးဖွင့်ခြင်းဖြင့်အမှတ်တံဆိပ်သည်အသစ်အဆန်းဖြစ်ပြီးလုံလောက်သောစတော့ရှယ်ယာရှိသည်။McDodo Type Type Type LED LED ကို L-ightning 8 Light သို့ L-ightning 8W 36W 36W PD သို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်အားသွင်းခြင်း USB C Data Cable* 18W ~ Max 36w High Power PD PD အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းခြင်း* Support Support Support Support Suppress iPhone 8/8 / xr / xr / xs / xs / xs max / 11/11 Pro; မိနစ် 30 ကျော်, 50% ပါဝါရောက်ရှိ
Earldom Bluetooth headphone High Bass စတီရီယိုတေးဂီတကို Music Wireless Obeket Nothing headphone ကိုဖျက်သိမ်းခြင်း
Earldom Bluetooth နားကြပ်အမြင့်စတီရီယိုတေးဂီတကို Music Wireless Stere How Stereo Music Music Wireless EduceSet Nounto head headphone factory formation - Earldom,
MacBook Air Pro Aderable Aluminum Laptop Riser Trowable MANDOBISATION ALANTOP Riser Followale - Shenzhen Kaisinuo Electrone Co. , Ltd.
MacBook Air Prodable Air Prodable Aluminum Laptop Riser Trowable Macbook Air Prodable Air Laptop Riser Foldable - Shenzhen Kaisinuo Electricics Countrative Transcless - Shenzhen Kaisinuo Electrone Co. , Ltd. အတွက် SHENZHEN KAISINUO Electronics Co. , Ltd.ပြီးပြည့်စုံသောဝှက်ထားသောဒီဇိုင်းသည်လုံးဝအသွင်အပြင်ကိုဘယ်တော့မှမထိခိုက်ပါ။
iPhone 12 11 Pro Max X78 အပေါင်း Xiaomi ကုမ္ပဏီ - Earldom - Earldom, ရင့်အမှတ်တံဆိပ်စျေးနှုန်းများသည်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရင့်ကျက်သောနေရာများရှိသည်။
usb က PS4 ကို PC ဂိမ်းနားကြပ်များအတွက်အလင်းစတီရီယိုအသံနားကြပ် rgb နားကြပ်မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းနားကြပ်ကစားကြိုး
Earldom အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး USB စက်ရုံ, အဆိုပါထုတ်ကုန်အကွာအဝေးကြွယ်ဝသောကွဲပြားခြားနားဖြစ်ပါတယ် PS4 ကို PC ဂိမ်းနားကြပ်များအတွက်အလင်းစတီရီယိုအသံနားကြပ် rgb နားကြပ်မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းနားကြပ်ကစားကြိုး။
Earldom အကောင်းဆုံး Earldom ကားဖုန်းကိုင်ဆောင်သူ iPhone universungal Magnet Magnet Magnet Magnet Magnet Magnet Magnet Phone Mountry Car Mobile Cell Phone Holder Stand Flassier, အမှတ်တံဆိပ်စျေးနှုန်းအားသာချက်သည်အေးဂျင့်များအားစျေးနှုန်းချိုသာနိုင်သည်။
Earldom အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိသော Earldom PD အစာရှောင်ခြင်း 45W QC4.0 လက်စွပ်စက်ရုံနှင့်အတူကားအတွက် USB-C မိုဘိုင်းဖုန်းအားသွင်းစက်အသေးအဖွဲစက်ရုံတွင်အသစ်စက်စက်သည်အသစ်အဆန်းဖြစ်ပြီးလုံလောက်စွာသိုလှောင်ထားသည်။အသွင်အပြင်သည်လက်ရာမြောက်သောနှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသည်, နေရာမယူရန်နေရာမယူပါ12-24v မော်ဒယ်များသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနှင့်ကား SUV ကား၏အရွယ်အစားကားများနှင့်အခြား Mainstream Models များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်